पहिलो बच्चाको पिता बन्दै गर्दा तपाईले यी कुराहरु गर्नै पर्छ, सिक्नै पर्ने कुरा - Sakaratmak Soch
पहिलो बच्चाको पिता बन्दै गर्दा तपाईले यी कुराहरु गर्नै पर्छ, सिक्नै पर्ने कुरा
पहिलो सन्तानको पिता बन्दै हुनुहुन्छ ? पक्कै तपाईंमा खुसीको सीमा छैन । यो खुसीकै कुरा हो नि । धर्तीमा तपाईंको सन्तानले पाइला टेक्दैछन् । नितान्त तपाईंको । यतिबेला तपाईंको मनलाई रोमाञ्चित तुल्याउँने एउटै जिज्ञासा हुनसक्छ, ‘मेरो बच्चा कस्तो होलान् ?’ बच्चा जन्मिएपछि उसको नाम के राख्ने, कसरी पालनपोषण गर्ने, कसरी खेल्ने, कसरी रमाउने, कसरी पढाउने ? यावत् योजना मनमनै बुनिसक्नुभएकै होला । तपाईंलाई हेक्का हुनैपर्छ, पिता बन्नु भनेको काँधमा अझै जिम्मेवारी थपिनु हो ।
कस्तो पिता बन्न चाहनुहुन्छ ? – असल पिता बन्न धेरै गाह्रो छ, यसको लागि तपाईलाई धेरै कुरामा त्याग गर्नुपर्छ । साथै आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । आफ्नो हुनेवाला बच्चाको साथमा हासीखुसीको जीवन बिताउने र उसलाई एक सुन्दर भविष्य दिने चाहना छ भने तपाईले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कैयौं पटक हामी हतारमा केहि गलत निर्णय लिने गर्छौं र त्यसको परिणामस्वरुप हामी जिन्दगी भर पछुताउँछौं । त्यसैले तपाई पिता बन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै सोच विचार गरेर आफ्नो पत्नीसँग छलफल गरेर मात्रै यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
असल पिता बन्नको लागि तपाईले धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । आज हामी तपाईलाई केहि यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु बताउन गइरहेका छौं जसलाई एक पिताले ध्यान दिनुपर्छ । १. आर्थिक योजना बनाउनुहोस् – अहिले महंगीले आकाश छोएको छ । त्यसैले महंगीको यो जमानामा बच्चाको उचित पालन पोषण गर्न सजिलो हुँदैन । त्यसैले तपाई बच्चाको योजना त्यतिखेर बनाउनुहोस् जब तपाई आर्थिक रुपले यसको लागि तयार र सबल हुनुहुन्छ ।
आजभोली बच्चाको पढाई लेखाई को साथसाथै अन्य चीजहरु यति धेरै महंगो भएको छ कि सामान्य आर्थिक अवस्था भएका आमा बुबाको लागि सबै कुराको उचित प्रवन्ध गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ । यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई एक खुसीयालीयुक्त र राम्रो भविष्य दिन चाहनुहुन्छ भने पहिले आँफैलाई आर्थिक रुपले मजबुत बनाउनुहोस् । २. स्वस्थ जीवनशैली – यदि तपाई बच्चाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । तपाई स्वस्थ हुनुहुन्न भने त्यसले तपाईको शुक्रकिटमा पनि असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले दैनिक व्यायामको साथै आफ्नो खानपानमा पनि ध्यान दिनुहोस् । साथै समयसमयमा चिकित्सकसँग आफ्नो चेकअप पनि गराइराख्नुहोस् ताकी तपाई लाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नदेखियोस् । ३. मद्यपान र धुमपान नगर्नुहोस् – मदिरा, चुरोट पिउने जस्ता नराम्रो बानीले तपाईको स्वास्थ्यलाई नराम्रो रुपमा मात्रै प्रभावित गर्दैन यसले तपाईको शुक्रकिट र डिएनएलाई पनि नोक्सान गर्छ । त्यसैले आफ्नो बच्चाको लागि यसखालका नराम्रो बानीहरुबाट आफूलाई टाढै रहनुहोस् ।
४. आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुहोस् – बच्चाको उचित लालनपालनको लागि आमाबुबाले धेरै खालका सम्झौता गर्नुपर्छ । एक असल पिता हुनको लागि सँधै आफ्नो नराम्रो बानीहरु त्यागिदिनुपर्छ ताकी त्यसको असर बच्चामा नपरोस् । आफ्नो बच्चाको अगाडि राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् । साथैआफ्नो रिसमाथि पनि नियन्त्रण गर्नुहोस् । तपाईसँग धैर्य हुनु आवश्यक हुन्छ र आफ्नो बच्चाको अगाडि सँधै शान्त र प्रेमपूर्वक प्रस्तुत हुनुहोस् ।
५. बच्चाको लागि एक उदाहरण बन्नुहोस् – हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो बच्चाले आफूभन्दा ठूलालाई देखेर धेरै कुरा सिक्न सक्छ । त्यसैले आफूलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि तपाई आफ्नो बच्चाको लागि एक उदाहरण बन्न सक्नुहुन्छ । एक असल पिता बन्नभन्दा पहिले एक असल मानिस बन्नु तपाईको लागि धेरै नै जरुरी छ ।
बच्चाले आपसमा झगडा गर्दा सहि कि गलत ? तपाईले थाहा नपाएका कुराहरु हुन सक्छन्
गल्ती मेरै थियो कसैलाई पाउने आशमा आफ्नो औकात नै बिर्सिएछु – मनछुने भनाईहरु